आजको राशिफल : बिहीवार, निकै राम्रो छ यी राशिको भा’ग्य ? – Khabarhouse
आजको राशिफल : बिहीवार, निकै राम्रो छ यी राशिको भा’ग्य ?
Khabar house | ७ श्रावण २०७८, बिहीबार ०१:४८ | Comments
काठमाडौं : वि.सं.२०७८ साल साउन ०७ गते। बिहीबार । ईश्वी सन् २०२१ जुलाई २२ तारिख । नेपाल संवत् ११४१। राक्षस संवत्सर । दक्षिणायन । वर्षा ऋतु । श्रीशाके १९४२। आषाढ शुक्लपक्ष । तिथि–त्रयोदशी,१६ घडी ४१ पला, दिउसो १२ बजेर ०२ मिनेट उप्रान्त चतुर्दशी । नक्षत्र– मूल,२६ घडी २७ पला, दिउसो ०३ बजेर ५७ मिनेट उप्रान्त पूर्वाषाढा । काठमाडौंमा सूर्योदय बिहान ०५ बजेर २२ मिनेट,सूर्यास्त बेलुकी ०६ बजेर ५६ मिनेट । दिनमान ३३ घडी ५७ पला ।
मेष राशि : प्रशासनिक क्षेत्रमा बलियो पकड रहने हुनाले कामहरु सजिलै सम्पादन हुनेछन् । राज्यबाट पाउने सेवा सुविधा पाइने छ भने मान सम्मानमा बृद्धि भएर जानेछ। धा’र्मिक तथा शैक्षिक यात्राको प्रशस्त सम्भावना रहेकोछ। धा’र्मिक प्रतिष्ठान तथा मन्दिर तिरको यात्रा गरी प्रसाद तथा टिका ग्रहण गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । खोज तथा अनुशन्धानको क्षेत्र बलियो रहने हुँदा मन प्रशन्न रहनेछ ।
वृष राशि : सानातिना घरेलु सम’स्याहरूले सताउनेछ भने सानो काम सम्पादन गर्न पनि दिनभर समय लाग्नेछ । समयले साथ नदिदा हुनै लागेको कामहरु बिग्रने तथा अरुकै पोल्टोमा जानेछन् । अध्ययनमा मन नजाने हुनाले अरुभन्दा पछी परिनेछ । व्यापारमा तत्काल लगानी गर्ने समय नरहेकोले केहि समय पर्खनु उचित हुनेछ । तरपनि बैक तथा वित्तिय क्षेत्रमा गरीएको लगानी भने फस्टाएर जानेछ । माया प्रे’ममा रमाउन चाहनेहरुका लागी समय उत्तम रहेकोछ ।
मिथुन राशि : व्यापारिक यात्रा हुनेछ भने व्यापारबाट मनग्गे नाँफा कमाउन सकिनेछ । दा’म्पत्य जीवनमा एक अर्कालाई सहयोग गर्दै अगी बढ्न सकिनेछ । भौतिक सम्पती तथा सवारी साधन प्राप्तीको गतिलो सम्भावना रहको छ । अध्ययन अध्यापनमा अरुलाई पछि पार्दै पुरस्कार तथा प्रशंसा पत्र जि’त्न सकिनेछ । माया प्रे’म गर्नेहरुले आफ्नो मन परेको मान्छेसँग बसेर समय व्यातित गर्दा खुशी भएको महशुस गर्नेछन् ।
कर्कट राशि : प्रे’म तथा मित्रताको व’न्धन कसिलो हुनुको साथै जीवन साथीले हरेक पाईलामा समर्थन पाइने योग रहेकोछ । काममा हस्तक्षेप गर्नेहरुलाई किनारा लगाउदै अगाडी बढ्न सकिनेछ । अदालती निर्णयहरु तपार्ईँकै पक्षमा आउने छन् भने वि’वादित विषयहरु आफ्नै पक्षमा फै’सला गराउन सकिनेछ । अध्ययनमा प्रगति भई भनेजस्तो नतिजा हात लगाउन सकिनेछ । व्यवसाय फस्टाएर जानेछ भने आम्दानीका स्रोतहरु फराकिला हुदै जानेछन् ।
सिंह राशि : अध्ययनमा सुधार भएर जानेछ भने भनेजस्तो नतिजा ल्याउन सकिनेछ। बौद्धिक कार्यमा सहभागी भई आफ्नो गतिलो प्रस्तुती पस्कने अवसर प्राप्त हुनेछ । परिवार तथा सन्तानबाट तपार्ईँले गरेको काममा सहयोग हुनेछ । व्यापार व्यावसायमा लगानी बढाउँदा राम्रो कमाई हुनेछ । माया प्रे’ममा विश्वासको वातावरण बढेर जानेछ भने भौतिक धन सम्पती लाभ हुने समय रहेकोछ ।
कन्या राशि : आमा तथा आमा सरहका मानिससँग टा’डिएर देश परदेशको यात्रा गर्नुपर्दा मन खिन्न हुने छ । राजनीतिकर्मी तथा समाज सेवीहरुले जनताको जनताको काम गर्न सक्दा मात्र मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठामा बृद्धी भएर जाने छ । खोज तथा अनुशन्धानमा उपलब्धी मुलक नतिजा नआए पनी आगामी दिनहरुमा काम गर्न सहज हुनेछ । तरपनि कृषि तथा पशुपालन व्यवसायलाई समय सापेक्ष आधुनिकिकरण गरी मनग्गे लाभ​ लिन सकिनेछ ।
तुला राशि : समयले साथ दिने हुनाले सानो लगानीबाट मनग्गे आम्दानी गर्न सकिनेछ । दाजुभाई तथा आफन्तसँगको सम्वन्धमा सुमधुरता बढेर जानेछ भने माया प्रे’मको डो’रो क’सिलो भएर जानेछ । आन्तरिक व्यावसायिक यात्राको प्रसस्त सम्भावना रहेकोछ भने सकारात्मक उपलब्धी हात लाग्नेछ । न्यायिक निर्णय तथा कानुनी फैसलाहरू तपार्ईँकै पक्षमा आउनेछन् । पढाइ लेखाइमा मनजाने हुनाले अरुलाई किनारा लगाउदै नतिजा सुरक्षित रहनेछ ।
वृश्चिक राशि : कुटुम्बसँगको सम्बन्धमा सुधार हुनेछ भने आफन्तको सहयोगले कामहरु समयमा नै सकाउन सकिनेछ । पारिवारिक जमघटमा मिष्ठान्न भोजन ग्रहण गर्ने अवसर प्राप्त हुने छ । माया प्रे’ममा रमाउन चाहनेहरुलाई समयले साथ दिनेछ भने जीवन साथीसँग थप आत्मियता बढ्नेछ । समाजमा बोलिको प्रभाव बढ्ने हुनाले बोलेरै थेरै कामहरु गर्न सकिनेछ । व्यापारमा वढोत्तरिको योग रहेकोछ भने नयाँ व्यावसाय सुरु गर्न सकिनेछ ।
धनु राशि : कन्फिडेन्स पावर बढ्ने हुँदा उपलव्धी मुलक कामहरु बन्नेछन् । राजनीति तथा समाजसेवामा समय दिनेहरुले पद पाउने समय रहेकोछ । व्यापार व्यावसाय फस्टाएर जाने तथा आम्दानीका स्रोतहरु फराकिला हुनेछन्। सुन्दर तथा वि’लासी सामानको प्रयोग मार्फत अरुको ध्यान आफूतिर आकर्षित गर्न सकिनेछ । प्रे’ममा रमाउन चाहनेहरुका लागी समयले साथ दिनेछ ।
मकर राशि : समयले साथ नदिदा दैनिक गुजारा चलाउन हम्मेहम्मे पर्ने छ । आफ्ना कमजोरिहरु भरसक लुकाउने प्रयास गर्नुहोला अरुले आलो’चना गर्न सक्छन् । मान तथा सम्मानमा दा’ग लाग्न सक्छ काम गर्दा ध्यान लिनु होला । पढाइ लेखाइमा अरुभन्दा पछी परेको भान हुनेछ भने काम गर्दा ख्याल गर्नुहोला काममा बाधा तथा दुःख दिनेहरु सक्रिय हुनेछन् । माया प्रे’ममा रमाउन चाहनेहरुका लागी समय उत्तम रहेकोछ ।
कुम्भ राशि : ईच्छा आकांक्षा तथा मनोकामना पूरा हुने समय रहेको छ। दाजुभाई तथा आफन्तबाट भने जस्तो सहयोग हुने हुनाले दैनिकी सहज मार्गमा अगाडी बढ्नेछ। सवारी साधन तथा अन्य सम्पत्तिहरु लाभ हुने योग रहेकोछ । सरकारी तथा पै’त्रिक धन सम्पती हात लागी हुने सम्भावना रहेकोछ भने व्यापार व्यावसायमा लगानी गरी आम्दानीका स्रोतहरु बढाउन सकिनेछ । पढाइ लेखाइमा सुधार हुने हुनाले अरु भन्दा अगाडी बढ्न सकिनेछ ।
मीन राशि : अध्ययनमा ध्यान केन्द्रित हुनेछ भने मेहनत गर्दा महत्वपूर्ण उपलव्धी हासिल गर्न सकिनेछ । राजनीति तथा समाजसेवामा जनताको साथ तथा समर्थन रहने हुनाले पद प्राप्तिको गतिलो योग रहेको छ । नयाँ काम पाउने तथा गरी रहेको ठाउमा बढुवा हुनेछ । व्यापार व्यावसायमा लगानी गरी मनग्गे धन तथा सम्पती कमाउन सकिनेछ । समयले साथ दिने हुनाले अन्य बौद्धिक क्रियाकलापमा पनी ध्यान जानेछ ।
तपाईँ दिन शुभ रहोस् । यूवा ज्योतिषी डीपी भण्डारी ज्योतिष परामर्ष सेवा केन्द्र। चाबहिल, काठमाडौं फोन न.९८०८३०७२७५ नोट : चिना तथा टिप्पन वनाउन,चिना हेराउन तथा वास्तुसँग सम्बन्धित जानकारिको लागी अवस्य सम्झनुहोला ।